चार भ्रम र यथार्थको कसीमा एमसीसी: वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितको टिप्पणी « GDP Nepal
चार भ्रम र यथार्थको कसीमा एमसीसी: वरिष्ठ अधिवक्ता डा. गान्धी पण्डितको टिप्पणी
नेपालमा हाल अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) द्वारा प्रदान गरिएको अनुदान स्वीकार गर्न हुने कि नहुने भन्ने मुद्दा निकै पेचिलो रुपमा उठेको छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो विवाद आफैँमा निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ । एकेडेमिक व्यक्ति र केही वरिष्ठ राजनीतिक नेताहरु नै भ्रम फैलाउने र एमसीसीबारे विकृत तर्क गरेर उनीहरु राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न खोजिरहेका छन् । हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि यो निकै विडम्बनाको विषय पनि हो ।
वास्तवमा, यो सम्झौता सार्वजनिक दस्तावेज हो र सबैलाई पढ्नको लागि खुला छ । तर, सबै झुटा जानकारी र विकृत तथ्यको नकारात्मक प्रभाव सिर्जना गर्न प्रसारित गरिएको देखिन्छ । एमसीसी ल्याउनको लागि अडान लिनुको सट्टा एमसीसी विरुद्ध जनतालाई भ्रम छरेर राजनीतिक स्वार्थ बटुल्नु देशहित पक्कै होइन । बरु सचेतन नेपाली जनताले वास्तवमा एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतामा के उल्लेख छ भन्ने थाहा पाउनुपर्छ । तर, उनीहरुलाई नै अँध्यारोमा राखिएको छ ।
एमसीसी विशुद्ध अनुदान हो, यो ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्ने सहुलियत कर्जा पनि होइन । यस्तो अनुदान जुन नेपाललाई चाहिन्छ । न त कुनै ब्याज फिर्ता गर्नु पर्ने वा साँवाको चिन्ता । नेपालले कुनै पनि सरकारबाट हालसम्म प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान पनि हो । एमसीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ समान आधारमा । निश्चित छन् सम्झौताका नियम र सर्तहरू जुन प्रकृतिमा सामान्य र विश्वव्यापी छन् । यो अनुदान सडक सञ्जाल÷विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाको विस्तारका लागि मात्र हो । त्यसको विरोध गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।
कतिपय बुद्धिजीवी र राजनीतिज्ञमा अवफाह फैलाउने प्रवृत्ति पनि छ र त्यसको शिकार भएको छ, एमसीसी । एमसीसीबारे निराधार तथ्यहरू निम्न चार आधारहरूमा हेरौंः
क) यो सम्झौताले नेपालमा अमेरिकी सेनाको उपस्थितिका लागि अनुमति दिन्छ । जसले गर्दा नेपालमा अफगानिस्तानमा जस्तो अवस्था सिर्जना हुन्छ;
ख) यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता÷अखण्डतालाई कमजोर बनाउँछ;
ग) एमसीसीमार्फत संयुक्त राज्य अमेरिका आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न चाहन्छ र त्यसैक लागि संसदबाटै अनुमोदन गर्ने सम्झौता भएको हो;
घ) एमसीसी कार्यान्वयनका लागि नेपालले भारतको पूर्व स्वीकृति लिन आवश्यक छ किनकी यो आयोजना कार्यान्वयन गर्ने भारतले हो ।
एमसीसीसम्बन्धी यी अफवाहको पछाडि कुनै आधार देखिँदैन । यसमा कुनै अमेरिकी स्वार्थ देखिँदैन किनकी नेपालले नेपालले यसका लागि निवेदन दियो र प्रतिस्पर्धाका आधारमा यो अनुदान पाएको हो । त्यो पनि नेपालका लागि निकै आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान । एमसीसी परियोजनाको लागि योग्य हुनको लागि अर्थात अनुदान पाउनका निमित्त एक निश्चित मापदण्ड पूरा गर्न आवश्यक छ, जुन एमसीसीद्वारा नै निर्धारित मापदण्ड हो । सौभाग्य भनौं कि नेपाल यसरी मापदण्ड पूरा गरेर छनोट हुने थोरै मुलुकमध्ये एक थियो । नेपालसहितका केही देशहरू मात्र योग्य र यस अनुदानको लागि छनोट भएका थिए । सोही अनुसार नेपाल र अमेरिका यो अनुदान सम्झौतामा सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो ।
एक व्यावसायिक वकिल र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विद्यार्थीको रूपमा मैले एमसीसी सम्बन्धी सम्झौतालाई राम्ररी अध्ययन गरेको छु । सम्झौतामा शब्द र भाषा निकै स्पष्टसँग तोकिएका छन् । सम्झौतामा रहेका कुनै पनि प्रावधान मैले भेटाउन सकिँन जसले नेपालको हित नगरोस् । नेपाललाई कमजोर बनाउने र सार्वभौमसत्ता तथा अखण्डताको लागि एमसीसीले कतै सम्झौत गरेको पाइँदैन । यस सम्झौताको बुँदा २.७ ले कहिल्यै अमेरिकी सेनाको उपस्थितिका लागि अनुमति दिँदैन । यो खण्डले स्पष्ट रूपमा भनेको छ कि एमसीसी कोषको उपयोग सडक सञ्जाल विकास र विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनाका लागि मात्र हुनुपर्छ । कुनै पनि सेना, प्रहरी वा सुरक्षाकर्मीलाई समर्थन वा सहयोग गर्न कोष गतिविधिहरु प्रयोग गर्न अनुमति दिँदैन । धारा ५.१ ले थप व्यवस्था गरेको छ एमसीसी कोष सैन्य सहायताको लागि प्रयोग भएको पाइएमा अमेरिका सरकारसँग यो सम्झौता खारेज गर्ने अधिकार छ ।
दोस्रो, यो सम्झौताले नेपालको सार्वभौमसत्ता वा अखण्डता कमजोर बनाउँदैन बरु यसले दुवै देशलाई समान रुपमा राख्छ । धारा ६ बमोजिम कुनै विवाद उत्पन्न भएमा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सिद्धान्त लागू गर्दै यो सम्झौताद्वारा तय हुनेछ । धारा ५ अन्तर्गत, यदि नेपालले उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नभएको पाइएमा राष्ट्रिय हितअनुसार यसलाई समाप्त गर्न सकिन्छ र यो सम्झौता कुनै पनि समयमा । कुनै कारण बिना, ३० दिनको सूचना दिएर रसंयुक्त राज्य अमेरिकाको लागी कुनै क्षतिपूर्ति भुक्तान नगरी सम्झौता रद्द गर्न सकिन्छ । अमेरिकाले पनि केही शर्तहरूमा यो सम्झौता रद्द गर्न सक्छ ।
तेस्रो, केही बुद्धिजीवी वा शिक्षाविद्को धारणा छ, एमसीसी जस्तो व्यावसायिक वा लगानी सम्झौता संसदद्वारा अनुमोदित हुनु आवश्यक छैन । त्यो सत्य पनि हो । तर, त्यहाँ दुईवटा कारण छन् । अमेरिकी सरकारले किन चाहियो सदनको स्वीकृति समावेश गर्न सम्झौताको धारा भन्नेमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ । पहिले यसले २ सय ७५ सांसदलाई छानबिन गर्ने अवसर दिनेछ कि यो सम्झौता देशको हितमा मा छ कि छैन भन्ने । दोस्रो, नेपाल पहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र विश्वसनीयतामा हारेको छ कि बूढीगण्डकीलाई खारेज गरेर । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना सम्झौता चीनले हस्ताक्षर गरेको थियो । तर, अघिल्लो सरकारले खारेज गरेको छ । यो कार्यले हाम्रो विश्वसनीयतामा ह्रास ल्याएको छ । यसरी, सदनको समावेश अनुमोदन खण्ड तार्किक र प्राकृतिक देखिन्छ ।
चौथो, त्यहाँ गलतफेहमी छ कि एमसीसी सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि भारतको सहमति आवश्यक छ । यो दृष्टिकोण पनि पूर्णतः निराधार छ । एनेक्स सम्झौताको भी मा स्पष्ट उल्लेख छ, जुन नेपाल सरकारलाई चाहिएको छ । क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन विकास गर्ने योजनामा बुटवल र गोरखपुर बीचको लाइनमा भारतले पहिले नै सहमति जनाइसकेको छ । यसरी अनुलग्नक ५ ले देखाउँछ यसका लागि भारतको सहमति आवश्यक छैन । यस सम्झौताको कार्यान्वयनको भावना र भाषा एमसीसी सम्झौता एकदम स्पष्ट छ र उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति छैन । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र स्वाधीनता । एउटा चाहिन्छ जे लेखिएको छ त्यसको आधारमा सम्झौताको भावनाको व्याख्या गर्नु आवश्यक छ । त्यहाँ व्यक्तिगत आधारमा होइन सनकी वा दलीय स्वार्थले दुश्प्रचार भइरहेको छ । यस सम्झौताको विरोध व्यक्तिगत लाभमा आधारित देखिन्छ वा मन नपर्ने वा पार्टी स्वार्थ मात्र यसका कारण हुन् ।
एमसीसी सम्झौताको उपधाराहरू धेरै नरम र लचिलो पनि छन् । जसमध्ये नेपालले भारत, चीन, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकसँग हस्ताक्षर गरेको सम्झौतामा समावेश छ । यदि हामी एमसीसी सम्झौता अस्वीकार गर्छौं भने यी मुलुक र एजेन्सीको सहायता पनि नेपाल कुनै हालतमा रहने छैन । कुनै ऋण वा अनुदान प्राप्त गर्न बहुपक्षीय र द्विपक्षीय एजेन्सीहरूको समान खण्डहरुसंग एमसीसी सम्झौता प्रतिकूल छैन ।
अब सरकारले दल र नागरिक समाजलाई विश्वास दिलाउन जरुरी छ कि एमसीसीमा कुनै नकारात्मक खण्ड छैन जसले नेपालको विरुद्धमा जाने सम्झौता हित र सार्वभौमसत्ताको कुरा गरिरहेको छ । यसमा अन्तिम निर्णय हामीले गर्नुपर्छ । यो सम्झौता टेबल गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्छ । संसदमा अनुमोदनको लागि पहिले टेबल हुनुपर्छ । त्यसो भएन भने नेपाललाई रु ६० अर्बभन्दा बढी घाटा हुनेछ । अनुदान रकममा यति ठूलो रकम गुम्नु भनेको नेपाललाई ठूलो धक्का हो ।
नेपाल अमेरिका उद्योग वाणिज्य संघको जर्नलमा प्रकाशित वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. गान्धी पण्डितको यो टिप्पणी अनुवाद गरिएको होः सम्पादक
प्रकाशित : २४ माघ २०७८, सोमबार